ती मूर्ख युवा ! कसरी बने महाकवि कालिदास ?
१४ कार्तिक २०७५, बुधबार १९:३४
एकपटक सोच्नुस् त ! यदि मूर्ख नै नभए यो संसार कस्तो हुन्थ्यो होला ! हामी भन्ने गर्दछौं जोसँग बुद्धि र विवेक छैन, त्यो मूर्ख हो । जनावरहरू विद्वान् हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरू मूर्ख पनि हुँदैनन् । विश्वमा मनुष्य मात्रै विद्वान र मूर्ख हुन्छन् । यो संसारमा मुर्खहरू नभए विद्वानहरूको अस्तित्व हुँदैन थियो होला । यो संसारमा विद्वान् होस् या नहोस् तर, पनि मूर्खचैं अवश्य हुन्छ र मूर्खहरू रहुन्जेल यो संसारमा बुद्धिजीवीहरुका लागि रोजीरोटी सुरक्षित छ ।
अहिले छन् र रहने नै छन् । सोच्नुस् त ! यदि मूर्ख नै नभए यो संसारमा सबै बुद्धिजीवीहरु मात्रै भए यो दुनिया कस्तो हुन्थ्यो होला ? कसले कसको कुरा सुन्थ्यो ? तँ पनि विद्वान् म पनि विद्वान्, न म तेरो सुनौं, न तँ मेरो सुन्, मूर्ख नभए यस्तै यस्तै कुराहरू सुनिन्थ्यो होला । आज हामीले मूर्ख तथा मूर्ख्याईंको चर्चा गर्न पनि पाउँदैन थियौं होला ।
सृष्टिको प्रारम्भिक समयदेखि दैत्य र दानव दुवै थिए भनिन्छ । त्यसै समयदेखि दैत्यहरू मूर्ख थिए, किनकी दैत्यहरु आफ्नो मायावी शक्ति प्राप्त गरेर सृष्टि बनाउने ईश्वरलाई नै चुनौती दिन्थे र त्यसको अन्त्य भयानक प्राणनाशक हुन्थ्यो । सत्ययुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग हुँदै अहिले एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान समयसम्म पनि मूर्खताको कमिको आभास भएको देखिंदैन ।